24 Jun 2019 . 6:14 PM
Keanu Reeves ကို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ဆွဲတင်ခဲ့တဲ့ Matrix Movie Franchise က အကောင်းဆုံး Sci-fi Movie တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Matrix Movie Franchise ကို Reboot ထွက်မယ်ဆိုပြီး ခန့်မှန်းခံရတဲ့အကြိမ်ရေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီလို Reboot ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကို The Matrix Reloaded နဲ့ The Matrix Revolutions တို့ထွက်ပြီး ၁ဝ နှစ်အကြာ ၂ဝ၁၃ အစောပိုင်းလောက်ကတည်းက ကြားနေရတာပါ။ ဒီကောလာဟလကို လက်တွေ့မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေတာက Warner Bros. ကနေပြီးတော့ Black Panther ထဲမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Michael B. Jordan ကို မင်းသားတင်ပြီး Matrix ဇာတ်ကားတစ်ကားထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းက အတိအကျမှန်လား မမှန်လားဆိုတာကိုတော့ သေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။
Discussing Film နဲ့ The Geek Worldwide ကတော့ Matrix4ကို ထုတ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြောထားပါတယ်။ အခုထွက်မယ့် Matrix က Reboot ဖြစ်မလား ၊ Remake လား ၊ Prequel ဖြစ်မလား မဟုတ်ရင်လည်း Sequel ဖြစ်လာမှာလားဆိုတာကိုတော့ တကယ် သေချာမသိရသေးတာပါ။ အခုသိထားတာက Lana နဲ့ Lilly Wachowski တို့ကပဲ ဒါရိုက်တာပြန်လုပ်မယ် The Matrix 1999 ရဲ့ Art Director လုပ်ခဲ့တဲ့ Hugh Bateup က Production Designer အဖြစ် ပြန်ပါလာမယ်ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ ရိုက်ကူးရေးကို ၂ဝ၂ဝ အစပိုင်းလောက်မှာ ချီကာဂိုမှာ စမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပိုင်းပြင်ဆင်တာကိုလည်း “Project Ice Cream” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လမ်းအသေးစိတ်ကိုတော့ လောလောဆယ်မှာ မသိရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် Keanu Reeves က Neo အနေနဲ့ ပြန်ပါလာမှာလား ၊ မပါဘူးလားဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်သေးပါဘူး။
အခုထွက်မယ်ဆိုတဲ့ Matrix ကားအသစ်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို The Incredible Hulk ၊ X-Men 3: The Last Stand ၊ X-Men United နဲ့ Ready Player One တို့မှာ ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Zak Penn က ရေးမှာပါ။
ဒီသတင်းတွေက လက်ရှိမှာ Official Press Release နဲ့ အတည်မပြုရသေးတာကြောင့် Keanu Reeves ရဲ့ Matrix ကိုမှ သဘောကျတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိနေရင် အရမ်းဂယက်မထသွားပါနဲ့ဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ Matrix က Keanu Reeves ရဲ့ Iconic Film မို့လို့ ဒီသတင်းကအနည်းနဲ့အများ စိတ်မသက်သာစရာဖြစ်တာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် အသစ်တစ်ကားဆိုရင်လည်း အတူတူကြည့်ကြတာပေါ့။
Source: The Source, Appocalypse
by Ngul Ciin . 45 mins ago